Abavelisi be-COVID-19 kunye nababoneleli - i-China COVID-19 Factory
IStrongStep® I-SARS-CoV-2 IgM / IgG ye-Antibody Rapid Test kit isetyenziselwa ukubonwa kwe-vitro esemgangathweni kunye nokuchongwa kwesifo se-SARS-CoV-2 antibody coronavirus COVID-19 kwiserum / iplasma / iisampulu zegazi (kubandakanya igazi le-venous kunye negazi lomnwe). yezigulana ezikrokrelwayo ukuxilongwa kosulelo kunokusetyenziselwa ukufumanisa ukuba umntu uneempawu okanye umntu ongenasifo osulelayo kunye novavanyo lweemolekyuli okanye ulwazi lweklinikhi.
Uvavanyo lilinganiselwe e-US ukusasazwa kwiilebhu eziqinisekiswe yi-CLIA ukwenza uvavanyo oluntsonkothileyo oluphezulu.
Olu vavanyo aluzange luhlolwe yi-FDA.
Iziphumo ezingalunganga aziluthinteli usulelo lwe-SARS-CoV-2.
Iziphumo zovavanyo lwe-antibody akufuneki zisetyenziselwe ukuxilonga okanye ukukhuphela ngaphandle usulelo lwe-SARS-CoV-2.
Iziphumo ezincumisayo zinokuba ngenxa yosulelo oludlulileyo okanye olukhoyo ngezifo ezingezizo ze-SARS-CoV-2 coronavirus, ezinje nge-coronavirus HKU1, NL63, OC43, okanye 229E.
Isixhobo seDual Biosafety System seSARS-CoV-2 Antigen Test sisetyenziselwa ukufumanisa umgangatho wenoveli coronavirus (SARS-CoV-2) nucleocapsid (N) antigen kwi-Sroat / Nasopharyngeal swab sampuli kwi-vitro. Ikhithi kufuneka isetyenziswe kuphela njengesalathi esongezelelweyo okanye isetyenziswe ngokudibeneyo kunye nokufunyanwa kwe-acid ye-acid ekuchongeni imeko ye-COVID-19 ekrokrelwayo. Ayinakusetyenziswa njengesiseko sodwa ekuchongeni nasekugxothweni kwabaguli be-pneumonitis abasuleleke yinoveli coronavirus, kwaye ayikulungelanga ukuvavanywa kwabemi ngokubanzi. Iikiti zilungele ukusetyenziswa ekuhlolweni okukhulu kumazwe nakwimimandla apho inoveli yokuqhambuka kwenoveli isasazeka ngokukhawuleza, kunye nokubonelela ngoxilongo kunye nokuqinisekisa usulelo lwe-COVID-19.
OKUBALULEKILEYO: LE MVELISO YENZELWE UKUSETYENZISWA NGOKUGQIBELA, HAYI UKUZIVIVINYA OKANYE UKUVAVANYA EKHAYA!
Isixhobo seDia Biosafety System seSARS-CoV-2 sovavanyo olukhawulezayo lweAntgen
Isixhobo seDual Biosafety System seSARS-CoV-2 Antigen Test sisetyenziselwa ukufumanisa umgangatho wenoveli coronavirus (SARS-CoV-2) nucleocapsid (N) antigen kwi-Sroat / Nasopharyngeal swab sampuli kwi-vitro. Ikhithi kufuneka isetyenziswe kuphela njengesalathi esongezelelweyo okanye isetyenziswe ngokudibeneyo kunye nokufunyanwa kwe-acid ye-acid ekuchongeni imeko ye-COVID-19 ekrokrelwayo. Ayinakusetyenziswa njengesiseko sodwa ekuchongeni nasekugxothweni kwabaguli be-pneumonitis abasuleleke yinoveli coronavirus, kwaye ayikulungelanga ukuvavanywa kwabemi ngokubanzi. Iikiti zilungele ukusetyenziswa ekuhlolweni okukhulu kumazwe nakwimimandla apho inoveli yokuqhambuka kwenoveli isasazeka ngokukhawuleza, kunye nokubonelela ngoxilongo kunye nokuqinisekisa usulelo lwe-COVID-19. Ukuvavanywa kuthintelwe kwiilebhu eziqinisekisiweyo phantsi kwemigaqo yesizwe okanye yabasemagunyeni bendawo.
ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid,